ဦးတင်မိုး အတွက် မိုးမခက စီစဉ်တဲ့ ဘလော့
‘ငါသည် ငါ၏ကိုယ်ကျိုးအတွက် သက်သက်ငှာ အသက်ရှင်အောင်မမွေး…။ ငါ့တိုင်းပြည်၊ ငါ့စာပေ၊ ငါ့သာသနာအတွက် ရသမျှအချိန်ကလေးကိုယူ၍ ဆောင်ရွက်ရင်း အသက်ရှင်အောင် ငါမွေးအံ့…။’
ဒါဟာအဓိဌာန်တခု၊ ဒါဟာ‘သစ္စာ’ဆိုတဲ့ပွဲတခု၊ ဒါဟာ ဆုံးဖြတ်ပြဌာန်းချက်တခု။
ဒီလိုနဲ့ လူငယ်တွေဟာ မိမိသီလကိုဆောက်တည်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကျိုးတဖက်မြင်သမားမဖြစ်နိုင်။ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူမဖြစ်နိုင်။
ငါ့ဟာမှငါ့ဟာ။ ငါ့သာသနာမှ ငါ့သာသနာဟု ငါစွဲတန်းလန်းနှင့် မျက်ကန်းသမားမဖြစ်နိုင်။ လူငယ်တွေဟာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အမိမြေစွန့်ခွာပြီး နိုင်ငံတကာရောက်ခဲ့ကြ ရတယ်။ ကြုံရာကျပန်း သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြရတယ်။ ငါတို့နိုင်ငံသားတွေ အလွန်သနားဖွယ်ကောင်းတယ်။
ဒါပေမယ့် တို့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓါတ်က မွန်မြတ်တယ်၊ သန့်ရှင်းတယ်၊ အများအကျိုးအတွက် တလက်ခုပ် တလက်ချ ရရာတာဝန်ထမ်းဆောင်ချင်တဲ့ စေတနာအပြည့်ရှိတယ်၊ ပင်ကိုယ်စိတ်ကောင်းရှိသူများပါ။
ကျွေးချင် မွေးချင် ပေးကမ်းချင်တဲ့စေတနာ၊ ကူညီစောင့်ရှောက်ချင်တဲ့ သဒ္ဓါတရားအားကြီးတဲ့တို့လူမျိုး။ တို့နိုင်ငံသားစရိုက်ကို ဘယ်တော့မှမစွန့်လွှတ်။ ပင်ကိုယ်သန္ဓေကောင်းပြီးသား လူမျိုးဖြစ်တယ်။
အဖြူအမည်းမရွေး၊ အနူအဝဲမရွေး၊ သွေးကွဲခြင်းမရှိ၊ အခန့်အညား အဟန့်အတားတွေမလုပ်တတ်။ မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင် သခင်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်။ ဒီစိတ်ဓါတ်၊ ဒီစေတနာ၊ ဒီအစဉ်အလာကို ငါချစ်တယ်။
ဒီသွေးကို ငါလေးစားတယ်..။ မိမိတို့ရဲ့ ဇာတိသွေး အမြဲပူနွေးနေစေဖို့ သတိပေးရခြင်းဖြစ်တယ်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း အခုအခါမှာ တို့နိုင်ငံအမှောင်ကျလို့ ဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝေနေတဲ့အချိန်မဟုတ်လား။
ဒီတော့- အမှောင်ကိုတန်ဆောင်လင်းပြီး အမှောင်ခွင်းဖို့အရေး ကြိုးစားပေးကြရမှာပဲ၊ ဒါလည်း တို့တာဝန် တရပ်ပေပေါ့။
တို့ငယ်ငယ်တုန်းက သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကလေးကို သဘောကျမိတယ်။ အဲဒါက တော့-‘သွေးသောက်ပီပီ တာဝန်သိသိ သစ္စာရှိရှိ…’တဲ့။
အဲဒီဆောင်ပုဒ်ကလေးလိုပါပဲ။ တို့တတွေဟာ ‘တာဝန်သိသိ၊ သစ္စာရှိရှိ’ဆိုတဲ့စိတ်ဓါတ်ကို အညွန့်တလူလူဖြစ်အောင်ပျိုးထောင်ရင်း အကျင့်ဆိုး စရိုက်ဆိုးတွေ မစိုက်ပျိုးမိအောင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်။
လူငယ်အလှဟာ နိုင်ငံရဲ့ အသရေတပါးမဟုတ်ပါလား။
လူငယ်တွေထွန်းတောက်မှ တို့နိုင်ငံ တမိုးသောက်မှာ မဟုတ်ပါလား…။
(မူရင်း - ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ် မိုးသောက်ကြယ်ဂျာနယ် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၃)
Posted by zarny win at 4:35 PM No comments:
Labels: Moe Thauk Kye editorial
(၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် မိုးသောက်ကြယ်ဂျာနယ် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၂)
မပါလဲမဖြစ်။ ပါလွန်းပြန်တော့လဲ အလုပ်မဖြစ်။
အရာရာရဲရင့်မှုတွေပျောက်၊ ကြောက်စိတ်တွေဝင်၊ အပြစ်တွေချည်းမြင်နေမှဖြင့် မလုပ်ရဲ၊ မကိုင်ရဲ၊ လမ်းမလျောက်ရဲဖြစ်တတ်တယ်။
သတိမပါတော့လဲ အရာရာမှာ အထိန်းမဲ့တဲ့ချည်ခင်လို ပရမ်းမတာဖြစ်တတ်တယ်။ ဟင်းလျာမှာ ဆားကို သင့်ရုံခပ်ရသလို သတိကိုလဲသင့်ရုံခပ်။ သတ္တိလဲမပျောက်စေနဲ့။ အိုးနင်းခွက်နင်း နင်းကျိုး နင်းကျွံ လူလွန်မသား လူရမ်းကားလဲ မဖြစ်စေနဲ့။
ကဗျာကတော့ ပျားပါပဲ။ ဖတ်လိုက်တိုင်းချို မျိုလိုက်တိုင်းဆိမ့်တဲ့ အရသာမဟုတ်လား။
တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ကဗျာအဆို အမိန့်ပါကလား။
ဒိဠမျက်မြင်မှာ ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ရမတဲ့။ အမြင်မှန်ရအောင် အနည်းနည်းရှုရ၊ သုံးသပ်ရမတဲ့။
ကဗျာကတိုပေမဲ့ အရသာကအချိုသား။ တွေးလိုက်တိုင်း ဉာဏ်ကျယ်၊ အမှန်တကယ်ကိုမြင်စေနိုင်တဲ့စကား ပါလား။
ဟုတ်ပါပေ့။ ငါတို့တမျိုးသား လုံးကို ဆုံးမတာ။
ဘာကိုမှမလေးနက် ပေါ့ပျက်ပျက်လုပ်တတ်တဲ့ ငါတို့ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုဖွင့်ပြတာ။
တို့ကလဲတို့ပဲမဟုတ်လား။ အပြောကတော့ လေလုံးမိုးလုံး မိုးတောင်ကချုန်း။ လက်တွေ့ကျတော့ မရေမရာ ၀ါစာကမာ။ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ရောက်ရာကျဘမ်း။ ဘာလုပ်လုပ် ကျကျနနလုပ်မှ။ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် လေ့လာဆည်းပူးပြီး ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်လုပ်မှ။ ပေါ့ပေါ့တန်တန် ကစားသမားဉာဏ်နဲ့ အပေါ်ယံဗန်းပြ ကောင်းရုံလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးကိုဖျောက်မှ။
သမိုင်းပုံပြင်ထဲက ကံရာဇာငယ်ရဲ့အကျင့်ဆိုးကို တမျိုးသားလုံးကျင့်သုံးမိတယ်။
မိမိထီးနန်းရပြီးရောဆိုတဲ့ လောဘစိတ်ရှေ့ထားပြီး ညတွင်းချင်း သစ်ငယ်ဝါးငယ်နဲ့ ထီးနန်းဆောက်ပြခဲ့သတဲ့။
ဖြစ်ကတတ်ဆန်း တောရမ်းမယ်ဖွဲ့သမား၊ ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်ကစားနဲ့ ကံရာဇာငယ်က အနိုင်ရခဲ့သတဲ့။ ပြီးပါလေရောဗျာ။ ကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာ ပပလွှားလွှား ပြပြစားစားလုပ်တတ်တဲ့ တနပ်စား ၁၂ ပွဲစားတွေ နေ ရာရခဲ့တယ်မဟုတ်လား။
နေရာရပြီးစတမ်း၊ အဖြီးအဖြန်း ညာလုံး ၀ါးလုံးတွေနဲ့ ဗမာတွေ လူဖြစ်ရှုံးခဲ့ တယ်မဟုတ်လား။
Posted by zarny win at 4:47 PM No comments:
၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလထုတ် မိုးသောက်ကြယ်ဂျာနယ် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၁ မှ)
လူငယ်တိုင်းမှာသမိုင်းရှိတယ်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိရှိတယ်။ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် မှဲ့စွန်းမှဲ့ပြောက်အထင်မခံရဘူး။
သန့်စင်အောင် အမြဲပွတ်တိုက်ဆေးကြောရမယ်။ သမိုင်းမှာအစွန်းထင်မိရင် တော်တော်နဲ့မပျောက်။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်သမိုင်းကိုဖွပ်ပါ…။ လျော်ပါ…။ သန့်စင်ပါစေ…။
‘သတိ’သည်‘ဆား’၊ ‘ကဗျာ’သည်‘ပျား’တဲ့…။ အမှားကင်းအောင်နေပါလေ။
စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတိုးပွားအောင် အတ္ထုပ္ပတ္တိစာတွေ များများဖတ်ပေးဖို့လိုမယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတ္ထု ပ္ပတ္တိဖတ်ရရင် ရိုးသားခြင်းက ထင်းထင်းပေါ်တယ်။ ဖြောင့်မတ်တာကိုတွေ့ရမယ်။ ကိုယ်ကျိုးမကြည့်၊ အများအကျိုးကိုကြည့်တတ်တာကိုသိရမယ်။ စံနမူနာယူစရာဖြစ်ရပ်တွေကို အမှတ်ရရဖြစ် နေမယ်။
တချို့ဆိုရင် ‘ဂျာနယ်ကျော်မမလေး’ရေးတဲ့ ‘သူလိုလူ’ကိုဖတ်မိလို့ သတင်းစာဆရာ၊ စာရေးဆရာ ‘ဂျာနယ် ကျော်ဦးချစ်မောင်’ကိုအားကျမိ၊ စံထားမိတယ်။ သူလိုစိတ်ဓါတ်မျိုးကို လေးမြတ်ကြည်ညိုမိတယ်။
‘ဗန်းမော်တင်အောင်’တို့၊ အခုအကျဉ်းစံသတင်းစာဆရာကြီး‘ဦးတင်းဝင်’တို့ဟာ ‘ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ် မောင်’ကို အားပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။ ကောင်းတာတွေအတုယူတော့ ကောင်းတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကူးစက်တယ်။ ကောင်းတဲ့အကျင့်စာရိတ္တကို အားကျမွေးမြူမိတယ်။
‘ဦးနေ၀င်း’အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ဒေါက်တာမောင်မောင်ကရေးခဲ့တယ်။ စိတ်ဝင်တစားဖတ်ကြည့်မိပါတယ်။ ဆောင် ရန်မဟုတ်။ ရှောင်ရန်သင်ခန်းစာတွေရခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့စရိုက်ဆိုးတွေ ရုပ်လုံးပေါ်နေတာမြင်ရတယ်။
စာရေးသူ‘ဒေါက်တာမောင်မောင်’ကတော့ ကုဋ္ဌနူနာကိုရွှေချ၊ သနပ်ခါးလူးပေးတာပဲ။
ဒါပေမဲ့ပင်ကိုယ်ကပုပ်နေလေတော့ ညှီစို့စို့ပုပ်အဲ့အဲ့အနံ့ကမပျောက်။ အဲဒီအတ္ထုပ္ပတ္တိကတော့ စံပြုစရာ အတ္ထုပ္ပတ္တိမဟုတ်။ ဝေးဝေးကရှောင်ရမဲ့ သရုပ်ဆောင်ဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်တယ်။
အတ္ထုပ္ပတ္တိတွေဖတ်ရတာကောင်းတယ်။ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေကို ဝေဖန်စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်တယ်။
Posted by zarny win at 4:48 PM 1 comment:
(၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၁ မှ)
လူငယ်ဆိုတာ ငါစွဲမကြီးရဘူး။ ငါစွဲမသို၊ ကိုယ်စွဲမထား၊ မေတ္တာပွားမှ လူငယ်တရားရှိရာရောက်မယ်။
လူငယ်အင်အားဖြုန်းတီးရင် နိုင်ငံကြီးပြိုပျက်မှာသေချာတယ်။ လူငယ်တွေဖရိုဖရဲဖြစ်နေသမျှ နိုင်ငံပြိုကွဲမှာမုချ။
လူငယ်တွေဟာ ကိုယ့်အခန်းကဏ္ဍကို ဖော့တွက်လို့မရဘူး။
နိုင်ငံရဲ့ တန်းဖိုးရှိတဲ့အသီးအပွင့်တွေဆိုတာ အမြဲသတိရရမယ်။
ကိုယ့်တန်ဖိုးဟာ နိုင်ငံအတွက် အင်မတန်ကြီးမားပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ခွန်အားဆိုတာမမေ့ရဘူး။
ငယ်ရွယ်နုပျိုခြင်းဆိုတာ ထာဝရမပိုင်ဆိုင်ဘူး။ တခဏသာပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။
ခုလို သွေးသစ်သားသစ်လောင်းတုန်း၊ အရွယ်ကောင်းတုန်း၊ အကျိုးရှိအောင်နေရမယ်။ ကျင့်သုံးရမယ်။ ပျက်စီးလေလွင့်နေမယ်ဆိုရင် ဘ၀တခုလုံး အမှိုက်ပုံလို တန်ဖိုးမဲ့သွားလိမ့် မယ်။
တိုင်းပြည်တခုရဲ့အနာဂတ်ကိုသိချင်ရင် ဒီနေ့လူငယ်တွေအခြေအနေကို အကဲခတ်ကြည့်ရင် သိနိုင်တာပေါ့။
လူငယ်တွေဦးတည်ချက်လွဲနေရင်၊ အပျော်ကြူးပြီး ယစ်မူးနေရင်၊ အချင်းချင်းအစေးမကပ်၊ စိတ်ဓါတ်တွေအကြောင်အကျားနဲ့ တကွဲတပြားဖြစ်နေရင် ဒီတိုင်းပြည်နာပြီသာမှတ်ပေတော့…။
အောင်ဆန်းလိုလူငယ်ကလေးတယောက် ထွန်းထွန်းတောက်တောက်ပေါ်ပေါက်လာလို့ တို့တိုင်းပြည်ဟာ ကိုလိုနီထမ်းပိုးအောက်က လွတ်မြောက်ခဲ့ရတယ်။
အောင်ဆန်းဟာ မြန်မာ့လွတ်မြောက်ရေးလမ်းကို ဘယ်ပုံရှာခဲ့တယ်ဆိုတာ ဂျပန်ရောက်မြန်မာလူငယ်တွေ အသိဆုံး…။ အထူးပြောဖွယ်မလို…။
“အရေးကြီးပြီ ညီနောင်အပေါင်းတို့ သွေးစည်းကာ ညီစေညီကြစို့…”
Posted by zarny win at 4:50 PM No comments:
(၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထုတ် အာဟာရစာစောင် အမှတ်စဉ် ၄၅ မှ)
ဂျပန်ခေတ် ‘အာရှလူငယ်’သီချင်းထဲက စာတပုဒ်။ အလွန်အဖိုးတန်တဲ့စာသားပါ။
ဟုတ်ကဲ့- လူငယ်ဆိုတာ ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အရွယ်ပျို၊ အရွယ်ကောင်းကလေးတွေပါ။
နေမင်းရောင် လမင်းရောင်၊ တို့စွမ်းပြရမယ်…”တဲ့။
ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ။ တကိုယ်ကောင်းစိတ်ကို ပယ်ရမတဲ့။ ဟုတ်လိုက်လေ။
အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့… ဖို့… ဖို့…၊ အဲဒီ ‘ငါ့ဖို့’ အကျိုးရှေးရှုတဲ့အရာတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ရမယ်။
ကုလားထိုင်မမက်ရဘူး။ နေရာမမက်ရဘူး။ တွင်ကျယ်အောင်မရည်ရွယ်ရဘူး။
တော်သူကို တော်သလိုနေရာပေးနိုင်ရမယ်။ အများအကျိုးကိုအဓိကထားရမယ်။
ပြောတော့လွယ်လွယ်ကလေးပါ။ လက်တွေ့ကျင့်တော့ အလွန်ခက်တယ်။ ငါ့နေရာ၊ ငါ့သြဇာ၊ ငါ့လူ၊ ငါ့မူ၊ ငါ့သဘော၊ ငါ့မနော၊ ငါတကောကောနေကြတဲ့အတွက် အစည်းအရုံး၊ အဖွဲ့၊ အသင်းပျက်တယ်။
ဒီတော့ ပန်းတိုင်ပျောက်၊ ပန်းတိုင်ကတလွဲ၊ အဓိက သာမညမကွဲ၊ ပုံကြီးချ›ဲတတ်ကြတယ်။ လူကဲ့ရဲ့စရာတွေ ဖြစ်လာတာပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဝေဖန်၊ ကိုယ့်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်၊ အမှန်ရောက်အောင်ပြင်ဖို့ လိုတယ်။
Posted by zarny win at 4:51 PM No comments:
U Tin Moe and guitar
Posted by zarny win at 9:17 AM 1 comment:
treasure of my life, poems from my heart - 57
ဘ၀ထဲက ရတနာ၊ ရင်ထဲက ကဗျာ (၅၇)
သစ်ရွက်ယော်ရီ ဣန္ဒနီကလေးကိုမြင်ရတော့ တောရကျောင်းမှာ တကိုယ်တော်ပျော်မွေ့နေရှာတဲ့ ရှင်ဥတ္တမကျော် စာဆိုကျော်မှာ ဈာန်မ၀င်စားဘဲ မနေနိုင်။ ကပျာကသီနဲ့ စာပန်းချီတကွက်ကို စုတ်ချက် “တို့” မိရှာတယ်။
ဆွစ်ဇာလန်ပြည် ဂျီနီဗာကန်ရိုးပေါ်ရောက်သွားတဲ့ စာဆိုကျော်မင်းသုဝဏ်ခမျာ သဘာဝအလှဓာတ်ကို မြင်ရတဲ့အခါ နှလုံးသားက ဆိတ်ဆိတ်မနေနိုင်ရှာ။
တဒင်္ဂအလှကို အမိဖမ်းလိုက်နိုင်တဲ့ ကဗျာအလှပါ။
ရင်ထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ သဘာဝရုပ်ပုံလွှာကလေး တည်ဆောက်ပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
နန်းတွင်းထဲက သာသာယာယာ ချိုချိုအေးအေး ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ နန်းမတော် မမြလေးရဲ့ တေးသံကတော့ ဘ၀ရဲ့အပူငွေ့ကလေး စင်ပါ့မလားလို့ စဉ်းစားချင်စရာ။
ငယ်စာရင်း ဖျက်လိုက်ပါ့ဘုရာ (ဖျာ)
မိန်းကလေးရဲ့ ညှိုးနွမ်းတဲ့အမူအရာကလေး ပေါ်လွင်လှပါပေ့။ လူ့ဘ၀ကို တကယ်ငြီးငွေ့တာမှ ဟုတ်ပါစ။ စိတ်နာသံကလေးများ ပါနေလေရော့သလား။ ကဗျာကလေးကိုဖတ်ရတာ ကရုဏာကြိုး လှုပ်နှိုးလိုက်သလို ခံစားရပါတယ်။
ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်းကဗျာကလေးတွေ ဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့ ဒီချောင်းလတာ တေးကဗျာရဲ့ အလှထဲမှာ နစ်ဝင်တော့မလိုလိုနဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် လူ့လောကကို လှည့်ကြည့်မိတယ်။ ဗေဒါလောကလား၊ လူ့ဘ၀လား၊ အတွေးပွားချင်စရာ။ ကဗျာဖတ်ပြီး အတွေးစကလေးတွေ အမျှင်တန်းပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့လေရဲ့။
ကဏန်းမ ရွှံ့စိုစို၊ တကိုယ်လုံ့ နီတွေး။
ဒီဆင်းပြီလေး“ …. တဲ့။
ကဗျာဆုံးသွားပေမယ့် အတွေးကမဆုံး။ လူ့ဘ၀အတက်အကျမှာ အခွင့်သာရင်တမျိုး၊ အခွင့်မသာရင် တမျိုးပြုမူတတ်ကြတဲ့ လူ့သဘာဝကိုများ မြင်မိသယောင်ယောင်။ ဗေဒါကျက်စားရာလမ်းခရီးက လူ့လောကကို လှစ်ခနဲ လှမ်းကြည့်မိတယ်။
ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း လေးချိုးကြီးတွေဖတ်ရတဲ့အခါ ခေတ်ရဲ့အရိပ်တွေ ထင်ဟပ်နေတာကို ခံစားရပြန်ပါတယ်။
သောကရတက်မီး” …. တဲ့။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးပျက်သုဉ်းရတဲ့ သောကမီး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်လို့ စိတ်ဆင်းရဲရှာတဲ့ ရတက်မီးတွေကြောင့် စိတ်မအေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကို စာနာခံစားမိပါတယ်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်ကျော်ကျော် ပြည်တော်သာခေတ်ကနဲ့ တူပါရဲ့။
ကမ္ဘာအေးစေတီဒါယကာ “မောင်ရွှေနု” ကိုလည်း အောင်ဇေယျတုရယ်လို့ ဆုတောင်းတဲ့အပြင် ယခင်အခါ ထမ်းပိုးတည့်တည့် ထမ်းခဲ့ကြတဲ့ “စိုး” နဲ့ “သန်း” ကိုလည်း တမျိုးကွဲ့လွမ်းခဲ့ပြန်ပါတယ်။ စိတ်တူကိုယ်တူ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ အတူနွှဲခဲ့ကြတဲ့ ဆရာကြီးရဲ့ တပည့်ရင်းတွေချည်း မဟုတ်လား။
ဆရာကြီးမှိုင်းဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ကျဆုံးစဉ်ကလည်း “သောင်းမြန်မရဏာစမုတ်ဆီက ချုပ်သနဲ့ ယင်းအလိုတွင် … (အောင်ဆန်းရယ်) ဒေါင်းလံပုဝါအုပ်ပါလို့ ကျုပ်ဖြင့် သင်္ဂြိုဟ်ချင်” လို့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းခဲ့ရတယ်။ “သြော် … တပည့်အရင်းတွေမို့၊ က၀ိမတင်းနိုင်ဘူးကွဲ့၊ သတိကင်းကာ မျက်ရည် ကျကျပြီး၊ ခက်ကပြီ … လက်ဆီမ ပါလို့၊ သောကဗလောင်ဆူတော့” လို့ ဆရာကြီး မျက်ရည်ကျခဲ့ ရှာတယ်။
လွတ်လပ်ရေးအလံ တိုင်ထိပ်ပေါ်မှာ လွှင့်တင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် ပြည်တွင်းစစ်သေနတ်သံကလည်း စတင်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆရာကြီးမှိုင်းက “မြန်မာပြည်မှာ နေစရာမကောင်းပြီမို့၊ ဂန္ဒီပမာ သေတာကောင်းတယ်” လို့ ကရုဏာဒေါသော ညည်းခဲ့ရှာပါတယ်။
ကဗျာအမျိုးမျိုးဖတ်ရတဲ့အခါ လွမ်းစရာဆွေးစရာ၊ စိတ်နာစရာ၊ တွေးတောစရာ၊ သဘာဝနဲ့ ခေတ်ကာလ ကိုပါ သတိပြုစရာ နှလုံးသားနယ်ပယ်အ၀န်း ကျယ်ခဲ့ပါတယ်။ တကိုယ်ရေအလွမ်းမှသည် ပြည်သူတွေရဲ့ မျက်ရည်ပင်လယ်အထိ ခံစားမှုနယ်နိမိတ် ကျယ်ပြန့်ရုံမက ခေတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဘိဓမ္မာအတွေးကိစ္စပါ နက်ရှိုင်းထိတွေ့ ခဲ့ရတယ်။
ကဗျာ့စောင်းကြိုး လှုပ်နှိုးမိပေသကိုး။ ။
ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် အတွဲ (၁၅၄)၊ မတ် ၂၀၀၆
Posted by zarny win at 10:59 PM 1 comment:
Labels: articles in NEJ
ကဗျာဆရာကြီး တင်မိုး (၁၉၃၃ - ၂၀၀၇)
မောင်သာနိုး (သို့မဟုတ်) အဖြီးအဖြန်း မကြိုက်သူ တင်မိုး လူပုံပန်းက အရပ်အမောင်း ခပ်လတ်လတ်၊ အသားအရေက အညာသွေးညိုညို၊ မျက်နှာက မချို၊ ခပ်တင်းတင်...
လူငယ့်ကြေးမုံများ (၅) တင်မိုး ‘ငါသည် ငါ၏ကိုယ်ကျိုးအတွက် သက်သက်ငှာ အသက်ရှင်အောင်မမွေး…။ ငါ့တိုင်းပြည်၊ ငါ့စာပေ၊ ငါ့သာသနာအတွက် ရသမျှအချိန်က...
Burmese Literature in Mandalay University
မန်းတက္ကသိုလ် စာပေရုပ်ပုံလွှာ တင်မိုး မန္တလေးတက္ကသိုလ် စာပေလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကို အမှတ်တရ ရုပ်ပုံလွှာ သ ပါရစေ။ “မန္တလေး”ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒုတိ...
treasure of my life, poems from my heart - - 33
ဘ၀ထဲက ရတနာ၊ ရင်ထဲက ကဗျာ (၃၃) ၁။ ပါရီက ကိုကို ဂျာမနီက ပျိုပျို လာပြီဗျဆို ဗမာပြည်က ညိုညို သာစည်ကကြို။ ကဗျာတပုဒ်ရယ်လို့ ဖွဲ့လိုက်တာ မဟုတ်ပါ...
မိုးသောက်ကြယ်ဂျာနယ်အယ်ဒီတာအာဘော်အဖြစ် ဆရာတင်မိုးရေးသားခဲ့သော `လူငယ့်ကြေးမုံများ` (၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထုတ် အာဟာရစာစောင် အမှတ်စဉ် ၄၅ မှ) လ...
treasure of my life, poems from my heart - 25
ဘ၀ထဲက ရတနာ၊ ရင်ထဲက ကဗျာ (၂၅) “ ... စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်တွေလက်ထဲ အာဏာမြဲနေသမျှ ဒုက္ခ၀ဲဂယက်က လွှဲမထွက်နိုင်မှာသေချာတယ် ... ” ၁။ ၁၉၆၀ တ၀ိုက်ဆီက ကျေ...
မိုးသောက်ကြယ်ဂျာနယ်အယ်ဒီတာအာဘော်အဖြစ် ဆရာတင်မိုးရေးသားခဲ့သော `လူငယ့်ကြေးမုံများ` ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလထုတ် မိုးသောက်ကြယ်ဂျာနယ် အတွဲ ၂၊ အမှတ...
treasure of my life, poems from my heart - 52
ဘ၀ထဲက ရတနာ၊ ရင်ထဲက ကဗျာ (၅၂) (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ပန်းတိုင်ဟာ “နိဗ္ဗာန်” ဆိုတာ လူတိုင်းအသိပါ။ နိဗ္ဗာန်ရရာရကြောင်း ကျင့်ကြံမယ်ဆိုရင် ငါစွဲ ...
မိုးသောက်ကြယ်ဂျာနယ်အယ်ဒီတာအာဘော်အဖြစ် ဆရာတင်မိုးရေးသားပေးခဲ့သော လူငယ့်ကြေးမုံများ (၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် မိုးသောက်ကြယ်ဂျာနယ် အတွဲ ၂၊ ...
treasure of my life, poems from my heart - 24
ဘ၀ထဲက ရတနာ၊ ရင်ထဲက ကဗျာ (၂၄) ၁။ ကျွန်တော့် အခန်းရှေ့မှာ တောင်ကုန်းစိမ်းစိမ်းကလေး။ သစ်ရွက်တွေ စိမ်းစိုဝေဆာ သာယာနေပါပကော။ ရှဉ့်ကလေးတွေလဲ ပြေ...
articles in NEJ (57)
Moe Thauk Kye editorial (5)
Win Pe's words on Tin Moe
သူက တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို သိပ်ချစ်တယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး အကျိုးရှိအောင် ဆောင်ရွက်ချင်စိတ် ပြင်းထန်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ဆန္ဒဓိပတိ ကြီးမားတာကို ထုတ်ဖော်ပြီး ပြောပြခဲတယ်။ လက်တွေ့ပဲ လုပ်တယ်။ သူကျွမ်းကျင်တဲ့ စာပေနဲ့ ကဗျာကို မဏ္ဍိုင်ထားပြီး အများကြီးလုပ်တယ်။ နေ့တိုင်းလုပ်တယ်၊ ရောက်ရာအရပ်တိုင်းမှာ ပြောတယ်၊ ဟောတယ်၊ လုံ့လ၀ိရိယ သိပ်ကောင်းတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် အများကြီး အကျိုးရှိတယ်။ စာပေနဲ့ ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်လေတော့ ထာဝရ အကျိုးပွားများနေတယ်။
(၀င်းဖေ၊ ခေတ်ပြိုင်၊ ၂၅-၁-၀၇)